Olola Dharaan Maqaa Wal Xurreessun Hatattamaan Dhaabbachuu Qaba! -
Olola Dharaan Maqaa Wal Xurreessun Hatattamaan Dhaabbachuu Qaba!
By fmegersa | July 11, 2018
Damee Boruun: Adoolessa 11, 2018
Sabni tokko seenaa boonsaa waloon gonnfata. Seenaa xuraa’aa ille akkuma kana wal qabaata. Saba tokko keessatti ammi tokko qaroome gar tokko immoo gowwomee yoo garbummaa jalatti kufe xoofoo garbummaa walumaan habuuqatu. Gar tokko beekaa fi goota yoo tahe gar tokko walaalaa fi luqqna yoo tahe hireen saba Sanaa danqamaa tahee hafe. Uummatni tokko hiree isaa ofiin murtiifachuukan danda’u beekaan walaala gorse, gootni luqna onnoomsee, inni dammaqe isaa rafaa jiru sochoosee yoo irree tokkummaan diina isaa dura dhaabbate duwwaa dha.
Seenaa Uummata Oromoo keessatti deddebi’ee kan argaa jiru yaroo qabsoon uummataa finiinee cee’umsaa sirnaa irra gahu ilmaan Oromoo akka hoolaa dabarsanii wal gurguruudhaan diina wajjin yaroo hariiroo tokko qabatanii dha. Gara isa darbee of duuba deebi’ee yaroo balleessuu irra waan har’a ija keenya duratti guyyaa waarii deemaa jiru hubachuun barbaachisaa dha. Mootummaa EPRDF kan hundee isaa raasee jigsaa jiru qabsoo Uummtaa Oromoo akka tahe wal nama hin gaafachiisuu. Qabsoo godhamaa jiru kana keessatti humna TPLFiin Uummata Impaayeera Itoophiyaa keessatu Uummata Oromoo irratti cubbuun hojjetamaa ture waan sammuu iishee xaxxeef TPLF gara boodaa aantee OPDO of duraa qabdee of haaromsuuf tattaaffii gochuuf filmaata isa duraa godhatee ture.
Haaromsa kana keessatti namoonni qamaan Oromoo tahan TPLF kana waan of irraa achii dhiibuuf ayyaana qabachaa dhufan fakkaatu. Utuu namoonni Oromoo kun dhugaan aangoo qabatanii uummata isaanii bukkee dhaabbatanii qabsoo Uummata Oromoo ida’atama taha malee kan jibamuuf hin qabu. Yaaddoon qabsawwotaa warri kun umurii isaanii guutuu diina wajjin tahanii yakka guddaan uummta isaanii irratti yaroo raawwatamu keessaa qooda fudhachaa turun har’a immoo gara kami deemu laata? Gaaffiin jedhu salphaa miti. Kana malee faaruu fi leelisa Habashaa qabaachuun isaanii ammam warra Habashaa Uummata Oromoo irraatti kakaasaa fi gurmeessaa akka jiran isaanuu hubachuu ni danda’u natti fakkaata. Kana malee inni afaaniin dubbatan yoo hojiin hin mul’annee shakkuun waanuma jiru.
Karaa biraa akka fedhii Muumicha Minsteeraa yoo tahe amma dand’ame walii galteen ijaarsota siyaasaa argamsiisuun walii gala biyya sana tasgabii, nageenyaa fi guddina biyyaaf yaaluun waan filatamuu qabu. Ijaarsa Oromoo kan ilaaluu ololli haaraan jidduu kana banamaa jiru baayyee fokkisaa tahuu isaa caalaa hegree Uummata Oromoof yaaddoo guddaa keessa nama galcha. Ijaarsonni waraana hin qabne korojoo isaanii fudhatanii duruu finifinnee galanii jiru. Kan waraana qabuu waliin taa’anii wal mari’achuun akkaata itti nagaanii fi wal galteen walii hojjechuun mari’atamee hiikaa qabaachuun barbaachisaa dha. Maaliif hin galamne waraanan raawwachuu dandeenya jedhanii waa’ee lolaa weedisuun yaroo isaa natti hin fakkaatu. Kana malee hojii fi yayyba Mumicha Ministeeraa wajjin jechii isaanii kun wal faalaa jira. Akka Obbo Lammaa fi J. Birahnu Juulaa jedhan yoo tahe torbaan lama keessatti WBO fixxuun ni danda’ama. Yaadni kun isaan irraa kan eegamu miti. WBOn waggaa 27 eessa turee jedhanii gaafatu? Gaaffii qaanii qabu. Waggaa 27 waraan Wayyaannee wajjin kan ilmaan Oromoo ajjeessaa fi ajjeesisaa ture isani. WBOn Uummata Oromoo wajjin diina saba isaa kufiisee kufaa ture. Haqa kana Uummatni Oromoo maratu beeka. Haayile Mariyaam Dasaaleyni akka lammaaffa itti hin deebinetti ni dhabamsiifna jedhee ofumaa dura darbee dhabame. Dhaadachuun salphaa dha. Hojiin agrsiisuun garuu jabaataa dha.
WBOn dhiiga gootota Oromoo Oromiyaa bilisa baasuuf dhangala’etu biqilee as gahe. Har’as borus kan guddatuu fi dagaaguu dhiiga qaqqalii ilmaan Oromoo bilisummaa saba isaanii dhangala’aa jiruun akka tahe hubatamuu qaba. WBO dorsiisuu fi itti dhaadachuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. WBOn mindaa furdaa argachuuf qabsoo gochaa hin jiru. Kaayyoo fi akeeka ittiin buluuf amma aarsaa tahutti warra of kennee beela, deebuu, daaraa, qorra, roobaa fi hongee dandamatee seenaa saba isaa boonsaa mirkaneessuuf qabsaawwu irratti agaamuun karaa jallaa irraa deemuu dha.
Ilmaan Oromoo diaspora warri aktivistoota of jedhan kan akka Jawwar Mohammed fi Isqeel Gabisaa warri Ideology ykn deemsaa siyaasaa OPDO qindeessaa fi gurmeessaa jiran jidduu kana Ololla dharaa ABO fi WBO irratti banan dhala Oromoo hundan abbaramuu fi tufamuu qabu. Utuu waan kijiban DHaabba OROMO WALBA tahe lafaa ka’anii maqaa hin xurreessiin waan barbaadan OPDO biraa argachuu waan isaa dowwu hin jiru. ABO fi WBO baduu ni danda’a utuu tahee bara Waranni Wayyaanee ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaa lafa irraa haxxa’aa ture ni bada. Akkuma kana duraa bara Mootummaa Haayilee Selaasse, Mootummaa Dargii, Mootummaa Malasaa fi Mootummaa Haayile Mariyaa godhamaa turee namni aangoo yaroof qabu hara’as qabsaawwan Oromoo fi warra shakkaman hundaa ajjeessuu fi hidhaan dararuu ni danda’a. ABO kaayyoo waan taheef humni balleessuu danda’u hin jiru. Kaayyoon Bilisuummaa Dhala Irraa Dhalatti Darba. Yoo nutti bakkaan gahuu hanqanne dhalli dhala keenyaa itti fufa.
Seenaa qabsoo Bilsisuummaa WBOn dhiiga isaan tareesse bareessaa jiru cilaatti itti dibuu irraa yoo of qusannee bareedaa. Warri hojii abaramaa fi yakkaamaa kana irratti bobaa’anii jiran saba isaanii fi seenaa saba isaanii biratti lama du’uuf deemu. Mumichi Ministeeraa karaan ABO wajjin mariatamee akkaataa itti wal hojjechuun danda’amu yaaduun yaada gargaaramuu qabu dha. Karaa biraa hoogganni ABO kununsifannaa guddaa WBOf gochuun dagatamuu akka hin qabne nan abdadha.
Yaroo cee’umsaa kana keessatti hundumtti keenya gorora keenya liqimsinee waan dubbannuu fi waan hojjennu adda baafnee hubachuu qabna. Waan goonnu dantaa uummatni Oromoo waloon qabachuu qabu yoo kan miidhu tahe irraa of qusachuu qabna. Injifannoon ilmaan Oromoo wal irratti argannu hin jiru. Injifannoo yoo arganne waloon akka sabaati waliin arganna. Warri dhuunfaan tajaajilamuu barbaadu dhiiga uummta isaaniin utuu hin taane dandeettii qabaniin dorgomanii argachuun karaa dha. Kanaafuu waan hin jirree uumanii maqaa wal xurreessuun ilmaan Oromoo jiddutti hatattamaan akka dhaabbatu tokko tokkoon keenya gahaa keenya raawwachuu qabna. Labsiin waraana OPDOn ABO fi WBO irratti agaamama jriuu boruu QBO fi Uummata Oromoo mara irratti akka tahu hubannee ammumaa akka hin milkoofne gochuu qabna.
← Announcement of the 2018 Macha Tulama Association (MTA) Annual members meeting OMN: How low can it sink? →